Etu ịtọ ntọala nchọgharị ndabere na iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Na mbata nke iOS 14 maka iPhone, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ngwa ndabara iji mepee weebụsaịtị na njikọ n'ime ozi ịntanetị, nkata na netwọkụ mmekọrịta, na-enweghị ike ịgafe ngwa Safari (ọ bụ ihe nchọgharị ndabara na ihe niile Ngwaahịa Apple). Nke a nwere ike iyi ihe na-enweghị isi ma doo anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị si na ụwa gam akporo, mana otu n'ime ike / adịghị ike Apple kachasị bụ n'ihi njikọ siri ike na ngwa sistemụ Apple, nke ọ na-agaghị ekwe omume ileghara anya. Ọ bụrụ na enwere ike ịhụ nke a dị ka uru iji mee ka usoro okike Apple dịgide, ọ na - egbochi nnwere onwe nke onye ọrụ, onye n'ezie enweghị ike imeghe njikọ yana ihe nchọgharị ha họọrọ.
Egwú a yiri ka ọ gbanweela na mmelite a: ka anyị hụ ọnụ otú ịtọ ndabere nchọgharị na iPhone, ịhọrọ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ dị na Storelọ Ahịa Ngwa (site na Google Chrome site na Mozilla Firefox, Opera na ihe nchọgharị na-enweghị aha nke DuckDuckGo).
N'isiokwu ndị na-esonụ, anyị ga-egosi gị otu esi elele maka mmelite sistemụ maka iPhone na, ọ bụ naanị mgbe ịnweta iOS 14 sistemụ nrụọrụ,, anyị nwere ike ịga n'ihu na nwụnye nke ihe nchọgharị anyị na-eme ka ndị dị mkpa mgbanwe na-eme ya ndabara nchọgharị na anyị iPhone.
Etu esi emelite iPhone
Tupu ịga n'ihu, anyị na-akwado nke ahụ mgbe niile lelee maka mmelite iPhoneKarịsịa ma ọ bụrụ na anyị ahụbeghị ụdị mbipute ọ bụla ma ọ bụ mmelite na ụbọchị ole na ole gara aga ma ọ bụ ọnwa. Imelite iPhone, jikọọ ya na netwọk Wi-Fi ngwa ngwa (n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs), pịa na ngwa ahụ Nhazika anyị gaa na menu General, anyị na-aga n'ihu Mmelite ngwanrọ na, oburu na enwere mmelite, wunye ya site na ịpị Budata ma wụnye.
Na njedebe nke nbudata anyị bidogharịa iPhone wee chere maka sistemụ arụmọrụ ọhụrụ ịmalite; ma ọ bụrụ na e nweghị update na iOS 14 (enwere ike n'ihi na iPhone anyị emeela ochie), anyị enweghị ike ime mgbanwe maka ihe nchọgharị ndabara. Maka ozi ndị ọzọ, anyị na-akwado ịgụ akwụkwọ ndu anyị. Etu esi emelite iPhone. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe iPhone anyị maka nke ọhụrụ ma ọ bụ maka nke a tụgharịrị echegharị mana dakọtara na iOS 14, anyị na-akpọ gị oku ka ị gụọ ntuziaka anyị. Kedu iPhone kwesịrị ịzụrụ taa? Ionsdị na ụdị dị.
Etu esi etinye ma ọ bụ melite ihe nchọgharị nke atọ
Mgbe emelite iPhone, anyị wụnye ihe nchọgharị kachasị amasị anyị site na ịmepe Storelọ Ahịa ma jiri menu Buscar, yabụ ị nwere ike ịchọ Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Touch, ma ọ bụ ihe nchọgharị DuckDuckGo.
Ọ bụrụ na anyị nwere otu ma ọ bụ karịa ihe nchọgharị arụnyere na iPhone anyị, tupu ịga n'ihu na isi kachasị mkpa nke nduzi a, jide n'aka na a na-emelite ha na nsụgharị kachasị ọhụrụ site na ịmepe Storelọ Ahịa App, na ịpị akara ngosi profaịlụ anyị na elu aka nri na emechaa pịa Melite ha niile. Ànyị maara ihe nchọgharị ndị ọzọ na Safari? Anyị nwere ike idozi nke a ozugbo site na ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị Ihe nchọgharị kacha mma maka iPhone na iPad ndị ọzọ na Safari.
Esi edozi ihe nchọgharị ọhụụ
Mgbe nbudata ma ọ bụ emelite ihe nchọgharị ndị ọzọ na iPhone, anyị nwere ike ịtọ ya dị ka ihe nchọgharị ndabere maka njikọ ọ bụla ma ọ bụ ibe weebụ anyị ga-emeghe site na ịkpọrọ anyị na ngwa ahụ. Nhazi, na-agagharị ruo mgbe ịchọta aha ihe nchọgharị ahụ,, meghee ya, pịa na menu ahụ Ndabere nchọgharị ngwa ma mee nhọrọ anyị na ndepụta a.
Pị na aha ihe nchọgharị ahụ ga-egosipụta akara nyocha, ihe ịrịba ama na usoro ahụ anabatala mgbanwe ahụ. Anyị anaghị ahụ ihe nchọgharị anyị na ndepụta ahụ ma ọ bụ na ihe ahụ apụtaghị Ndabere nchọgharị ngwa? Anyị na-enyocha na ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ dị ugbu a (dị ka a hụrụ na isi ndị gara aga), ma ọ bụghị na ọ gaghị enwe ike ịme nhọrọ ọ bụla.
Na obere mgbanwe a, Apple na-anwa ịpụ na igbe ahụ wee bịaruo nso na mgbanwe na ịdị irè hụrụ na ama ọ bụla gam akporo ama. N'ezie, yana iOS 14 anyị anaghị ejikọta na iji Safari maka njikọ ọ bụla mepere na ozi ịntanetị ma ọ bụ nkata, nke na-enye anyị ohere iji ihe nchọgharị kachasị amasị anyị mgbe ọ bụla ọ dị mkpa. Enwere ike ịhụ nke a dị ka "ọkara mgbanwe" ma ọ bụ bụrụ "mgbanwe": Apple achọpụtala na ndị ọrụ ya anaghị ejikọkarị ya na ngwa ọ na - ewepụta yana na, n'ọtụtụ oge, ha na - eji Safari naanị maka sistemụ adịghị. you nwere ike iji ihe nchọgharị ndị ọzọ na ndabara (nke dị ugbu a na iOS 14). Na mgbakwunye na ihe nchọgharị ahụ, ihe ngbanwe ngwa ndabara dịkwa maka ngwa ngwa ndị ọzọ dị ka Mail: ya mere, anyị nwere ike mepee ozi ịntanetị anyị ma ọ bụ mgbakwunye na ndị ahịa ndị ọzọ na-enweghị ịgafe ngwa sistemụ jikọtara na gburugburu Apple (nke ngwa ngwa mana ọ bụghị mgbe niile ka ndị nwere ọrụ ndị ọzọ).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ndabara ngwa ọdịnala na ihe gam akporo ama, anyị nwere ike ikwu na ị na-agụ anyị ndu Etu esi agbanwe ngwa ndabara na gam akporo. Anyị na-ejikarị kọmputa Windows 10 eme ihe mana anyị amaghị otu esi agbanwe mmemme ndabara? Na nke a, anyị nwere ike inye aka na usoro akọwapụtara na ntuziaka anyị. Esi gbanwee ngwa ọdịnala na Windows 10.
Ọ bụ na anyị achọghị ịhapụ Safari na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ka anyị na-atụle ya ihe nchọgharị kachasị mma maka iPhone? Na nke a, anyị nwere ike ịga n'ihu na-agụ n'isiokwu anyị Safari aghụghọ na mma iPhone na iPad nchọgharị atụmatụ, nke mere na ị nwere ike ozugbo ịmụta dị iche iche bara uru aghụghọ na-ezo ọrụ iji nọgide na-eji nke a ndabere nchọgharị.
Otu esi emepụta egwu ọkpụkpọ na YouTube